बर्ड फ्लू के हाे, मान्छेमा कसरी सर्छ ? मान्छे र कुखुरा बर्ड फ्लू लागेकाे यसरी थाहा पाइन्छ « News24 : Premium News Channel
बर्ड फ्लू के हाे, मान्छेमा कसरी सर्छ ? मान्छे र कुखुरा बर्ड फ्लू लागेकाे यसरी थाहा पाइन्छ
प्रकाशित मिति : May 03, 2019
काठमाडाैं । यसअघि बर्ड फ्लूका कारणा कुखुरा लगायतका अन्य पन्छीहरू धेरै मरेकाे सुन्दै र देख्दै आएका थियाैं तर नेपालमा पहिलाेपटक मान्छेमा पनि बर्ड फ्लू देखिएकाे छ । बर्ड फ्लूको संक्रमणका कारण काभ्रेमा एक युवकको मृत्यु भएसँगै मानिसमा पनि बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएको हो ।
आखिर बर्ड फ्लू के हो, यसका लक्षण कस्ता हुन्छन् र कसरी बच्न सकिन्छ । हामीले केही जानकारी प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरेका छौँ ।
बर्ड फ्लू के हो? कसरी मान्छेमा सर्छ ?
खोकीको सङ्क्रमण जस्तै हो बर्ड फ्लू, जसले कुखुरा तथा पक्षीहरूमा विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ। बर्ड फ्लू एभियन इन्फ्लूएञ्जा भाइरसको छोटकरी रुप हो। यो भाइरसको पूरा नाम हाइली प्याथोजोनिक एभियन इन्फ्लूएञ्जा अर्थात् एचफाइभ एनवान हो।
यो रोग विशेषगरी चरा प्रजातिबाट फैलिने गर्दछ । यो जतिबेला जहाँ पनि फैलन सक्छ। यो रोग मानिसमा पनि सर्न सक्छ। मरेको कुखुराको सम्पर्कमा रहँदा मानिसलाई सर्ने खतरा हुन्छ ।
बर्ड फ्लूको भाइरस विशेष गरी कुखुराको मासु, प्वाँख, सिंगान, र्‍याल, सूली, अण्डा, अण्डा राख्ने क्रेट आदिको सम्पर्कबाट सर्दछ । त्यस्तै, कुखुरा काट्दा, भुत्ल्याउँदा, दानापानी दिँदा र हेरचाह गर्दासमेत सर्छ ।
बर्ड फ्लू बारे जान्नुभन्दा पहिला तपाईलाई भाइरस कति प्रकारको हुन्छ । सामान्यतया भाइरस तीन प्रकारको हुन्छ । ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ प्रकारको भाइरसमध्ये ‘ए’ प्रकारको भाइरसलाई खतरनाक मानिन्छ । यो भाइरस मानिस र पंक्षी दुवैको माध्यमबाट फैलिन सक्छ । त्यसैले बर्ड फ्लूलाई ‘ए’ भाइरस अन्तर्गत राखेको हो ।
यो रोग सर्वप्रथम सन् १९७८ मा पक्षीमा र सन् १९९७ मा मानिसमा देखिएको थियाे। बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण भेटिएको विश्वको पछिल्लो ६६ औं मुलुक हो नेपाल।
कुखुरामा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण कसरी थाहा पाउने ?
कुखुरामा बर्ड फ्लूको सङ्क्रमण थाहा पाउने पहिलो विधि हो, र्‍यापिड टेस्ट। यो टेस्टको सुविधा देशका पाँच विकास क्षेत्रमा अवस्थित क्षेत्रीय प्रयोगशालामा छ। यसबाट ए समूहको भाइरस हो कि होइन पत्ता लगाएपछि अर्को टेस्टका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइन्छ, जहाँबाट एचफाइभ एनवान हो, होइन पत्ता लाग्छ।
पोल्टी फार्म वा घरमा पालिएका कुखुरामा र्‍याल-सिंगान काढ्ने, लोती सुन्निने, लोती र सिउर हरियो हुने, डाइरिया हुने लक्षण देखा परी अप्रत्यासित रूपमा कुखुरा मर्न थाले भने पशु चिकित्सक वा प्राविधिकहरूलाई खबर गरिहाल्नु पर्दछ।
याे राेग कुखुरा फार्मका कामदारलाई बढी सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । संक्रमित कुखुरा फार्म निरीक्षण गर्ने पशुचिकित्साकर्मी र पशुस्वास्थ्य प्राविधिक पनि उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
चिकित्सकहरूका अनुसार मानिसलाई अरु फ्लू लाग्दा देखिने लक्षणजस्तै यसका लक्षण पनि हुन्छन्। चिकित्सकहरुका अनुसार कतिपय लक्षणहरू अचानक पनि देखिन सक्छन् । सामान्यतया भाइरसको सम्पर्कमा आएको तीनदेखि पाँच दिनमा देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बर्ड फ्लू लागेमा मानिसमा निम्न लक्षण देखिन्छन् :
अत्यधिक रोगजनक विषाणु कुखुराको बथानमा तेजीले फैलन्छ। कम रोगजनक विषाणु कम घातक हुन्छ। यसले प्रायःजसो कुखुरामा फूल उत्पादनमा प्रभावित पार्छ। एवियन इन्फ्लुएन्जा धेरैजसो संक्रमित तथा स्वास्थ्य पक्षीहरुको सम्पर्कद्वारा फैलिन्छ। बर्ड फ्लू फैलन नदिनकाे लागि निम्म कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।
रोग नियन्त्रण गर्न प्रत्येक कुखुरापालक र व्यवसायीसँग ठोस कार्यविधि तथा योजना हुनुपर्छ ।
रोग नियन्त्रणका लागि जैविक सुरक्षाको नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण मानिन्छ । कुखुराका बथानलाई काँठे कुखुरा, हाँस तथा जंगली चरासँग लसपस हुनबाट बचाउनुपर्छ ।
कुखुरा फार्ममा काम गर्नेले चलाउने सवारीसाधन अरूले चलाउनुहुँदैन ।
व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले संक्रमण प्रसारण न्यून गर्न सघाउ पुर्याउँछ । जसमा आँखा, नाक, मुख र हातको सुरक्षा महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि, यिनै मार्ग भएर भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्ने गर्छ । एप्रोन कभर, बुटकभर, हातकभर, रौँ कभर र टोपीलगायत व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरण सामग्री मानिन्छन् ।
तपाईं बस्ने वरपर कुनै पनि पंक्षी मरेको देख्नेवित्तीकै सचेत हुनुहोस्, आफैं जान्ने भएर टिपेर फ्याल्नेतिर नलाग्नुस् ।
आफ्ना बालबालिकालाई त्यस्ता पंक्षीहरुको छेउछाउमा जान नदिनोस् ।
कुखुरा तथा पंक्षीको मासु मज्जाले धोएपछि राम्ररी पकाएर मात्रै खाने गर्नुहोस ।
तपाईको टोल छिमेकमा कुखुरा तथा पंक्षीहरु मरेको देख्नु भएको छ भने तुरुन्तै सरकारी अधिकारी तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुमा खबर गरि जानुहोस ।
यसरी तपाईको टोल छिमेकमा कुखुरा तथा पंक्षीहरु मरेको थाहा पाउनु भयो या शंका लाग्यो भने माक्स लगाएर हिड्नुहोस ।
(विभिन्न एजेन्सीहरूकाे सहयाेगमा)
संविधान बाहिर गएर दाँयाबाँया नगर्न स्थानीय तहलाई कानूनमन्त्री तुम्बाहाम्फेको आग्रह
तारा आचार्य, विराटनगर, १८ फागुन । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पछिल्लो समय विकास गरिएको योजना
काठमाडौं, १८ फागुन । दुईजना नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशङ्का भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन्